Izinkinga zanqwabelana, ukucindezeleka, izinkumbulo ezimbi - konke lokhu kuthinta ubuthongo bethu futhi ubuthongo. Ngaphezu kwalokho, kunzima ukulala ebusuku, ukuze ukwazi namanje uvuke ebusuku baphonsa bese uvula ngaphandle kokulala. Cishe akunakwenzeka ukuba aphumelele ngokushesha ukuxazulula zonke izinkinga bese ukhohlwa ngazo. Ngakho ake sibheke izindlela ukuzumeka masinyane. Okokuqala, udinga ukuthi ucabange ukuthi kumele ushise noma imicabango yakho futhi banqobe ukungakhululeki komzimba, konke lokhu ebambezela evamile futhi ngokushesha ukuzumeka.
Siyazi ukuthi ungakwazi masinyane alale - okokuqala, kudingeka kahle ulungiselela embhedeni. Akufanele nakancane adle ukudla esindayo amahora 2-3 ngaphambi sokulala, ungabhemi noma aphuze ikhofi. utshwala futhi kangcono ukuthatha lutho, uma nje kancane iwayini elimnandi elibomvu, bese, uma akusiyo kusuka kunoma iyiphi ukucabanga phambili. Esikhathini esifanayo, kufanele ayeke yonke imisebenzi ezihlobene nomsebenzi noma ezinye izinkinga. okungenani amahora amabili kufanele abe ukuphumula yakho. Enye indlela ngokushesha ukuzumeka - funda eqanjiwe ngobusuku obubodwa. Kodwa kungcono ukukhetha isihloko kwekuqukethe asishayisani nezinkinga yakho, uma kungenjalo uzoqala nokucabanga ngazo futhi.
Kunzima ukwenza isiphetho ngalokuvakalako. Ngakolunye uhlangothi - lokhu kuyinto excitation ezengeziwe yomzimba, futhi ngakolunye - imbuyiselo umthwalo ezinhle zomsebenzi we engqondo. Ungenza elula ezilula ezimbalwa futhi izivivinyo ngokuhlanganyela. Ukuma isikhathi eside esitshekile phambili, ukushintsha isikhundla salo emuva, aqhele, imikhono, imilente. Izungezisa entanyeni, izandla kanye amathe ezinyawo. Lena ngenye indlela ukuzumeka masinyane. Okungenzeka nje ngaphambi sokulala ukuthatha gijima dlala. Ukuhlolwa kwesikhathi, ukuthi muhle kakhulu ucansi. Uma idwetshwa ukwenza amandla ukuzivocavoca, ungenza kanjalo ngaphansi kokuthi, kakhulu, kodwa ungavumi imisipha yakho umthwalo eqinile ukugwema excitation ezengeziwe umzimba.
Uma sezilele, udinga bazikhethele isigqi ukuphefumula, lapho khona ukugxilisa ingqondo kulokho hhayi engqondweni yami, futhi umoya wakho. Ukucabanga ngokushesha kangakanani ukulala, ungakwazi iphendukele iqhinga kancane: uzenza inqubo ukububula ekhethekile. esiswini Okokuqala, bese ukuphefumula esifubeni, bese ingqwababa. Ukuze aveze umoya ofanayo. Kunikezwe inqubo akulula, kodwa shesha nge ukuthuthukiswa yayo akudingekile. Into ebaluleke kakhulu kuwo - ukukwazi ukushintshela ukuphefumula imicabango yakhe siqu. Lapha kungcono ukugxila ezindaweni lapho emoyeni kunokugxila ezintweni imisindo.
Ngokungangabazeki, into ebaluleke kakhulu kule nqubo yokulungiselela ngilale ngokushesha. Noma yimuphi imisipha yomzimba ngenxa "ujamu" inkinga ezingaxazululeki ekujabulisayo. Yiqiniso, uma kakade yonke Kulezi zindlela ezingenhla, imisipha yakho uqale uphumule ngokwakho, kodwa namanje banake "wesikole" lomzimba wakhe ngenhloso kokuba ke ekhukhwini imisipha ukungezwani. Ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze imisipha ubuso esweni ndawo, emabunzini izindebe. Bheka isimo esishubile entanyeni. Uma uthola ukungezwani, zama uphumule kule ndawo.
Umthelela omkhulu kunabo bonke.
Uzokwazi ukuba athole imiphumela emihle uma enze zonke izinqubo ezichazwe inkolo nsuku zonke. I eside isikhathi uya wenze lokhu, umzamo ngaphansi udinga kusihlwa futhi kuyoba lula ukuba sifeze inqubo yonke ebangela ubuthongo okwesikhashana. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka okusheshayo ngilale kanye evamile ubuthongo omuhle. Futhi ekugcineni, akudingekile ukuba nizifeze zonke lezi izincomo ngokucophelela futhi siqaphelisise kubo. Akunakwenzeka ukukala ngokunembile isikhathi kanye nezinqubo okufanele ukhathazeke uma uphuthe okuthile. Lokhu kuzodala ukungezwani kwaphela esingezelelweko sesikhundla. Kuyinto kakhulu eyanele nje uzizwe isimo sakho ekhululekile ngaphambi sokulala.
Okungasho ngokugedla amazinyo elele
Ukuhlukunyezwa kwezidakamizwa e-Russia - usongo sonke isizwe